သမီးငယ်လေးကို မွေးဖွားဖို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရှိတဲ့ အီတလီကို လိုက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ချမ်းချမ်း – Cele Posts
ဒုတိယရင်သွေး သမီးလေးကိုတော့ ခင်ပွန်းရှိတဲ့အီတလီမှာ မွေးဖွားချင်တာမို့ ချမ်းချမ်းက သူမခင်ပွန်းရှိတဲ့ အီတလီနိုင်ငံကို လိုက်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ မီးဖွားချိန်မှာ အနားမှာခင်ပွန်းရှိတော့ ပိုပြီးအားတက်တာကြောင့် အခုလိုလိုက်သွားပုံပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ။ ကိုယ်ဝန် အရင့်အမာနဲ့လိုက်ပါသွားတာမို့ ပရိသတ်တွေက စိတ်ပူပြီး ဂရုစိုက်ဖို့လည်း မှာခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ချစ်ရတဲ့ သမီးကြီးလေးရဲ့ အသက် (၇) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာလည်း သမီးလေးလိုချင်တဲ့ သိုက်သိုက် ဝန်းဝန်း မိသားစုဘဝလေးကို မကြာခင်မှာနေရတော့မယ့် အကြောင်း ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ညီမလေးနောက်ထပ် တစ်ယောက် ထပ်ရတော့မှာမို့ ဂင်္ဂါလေးလည်း အရမ်းကိုပျော်နေခဲ့ပါတယ်။ မေမေ့ရဲ့ဗိုက်လေးကို တကိုင်ကိုင်နဲ့ပျော်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ သမီးကြီးလေးရဲ့ ပုံရိပ်ဟာ မေမေ့ အတွက်တော့ ကျေနပ်စရာပါ။
အီတလီကိုလိုက်သွားတော့မယ့်အကြောင်းကို ” Heading to Italy!!! I miss all my fans and my friends!!! Mom and dad take care. Miss u ginngar and my hubby. God bless the trip!! I m alone for the long journey but I m strong enough to do this..god bless my trip to Italy. ” ဆိုပြီး ချမ်းချမ်းကပြောပြလာ ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းခရီးအန္တာရယ်ကင်းပြီး ရင်သွေးလေးကို ချောချောမွေ့မွေ့ မွေးဖွားနိုင်ပါစေ။
သမီးငယျလေးကို မှေးဖှားဖို့ ခငျပှနျးဖွဈသူရှိတဲ့ အီတလီကို လိုကျသှားပွီဖွဈတဲ့ ခမျြးခမျြး
ဒုတိယရငျသှေး သမီးလေးကိုတော့ ခငျပှနျးရှိတဲ့အီတလီမှာ မှေးဖှားခငျြတာမို့ ခမျြးခမျြးက သူမခငျပှနျးရှိတဲ့ အီတလီနိုငျငံကို လိုကျသှားခဲ့ပွီပဲဖွဈပါတယျ။ မီးဖှားခြိနျမှာ အနားမှာခငျပှနျးရှိတော့ ပိုပွီးအားတကျတာကွောငျ့ အခုလိုလိုကျသှားပုံပါပဲ ပရိသတျကွီးရေ။ ကိုယျဝနျ အရငျ့အမာနဲ့လိုကျပါသှားတာမို့ ပရိသတျတှကေ စိတျပူပွီး ဂရုစိုကျဖို့လညျး မှာခဲ့ကွပါသေးတယျ။
ခဈြရတဲ့ သမီးကွီးလေးရဲ့ အသကျ (၇) နှဈပွညျ့မှေးနမှေ့ာလညျး သမီးလေးလိုခငျြတဲ့ သိုကျသိုကျ ဝနျးဝနျး မိသားစုဘဝလေးကို မကွာခငျမှာနရေတော့မယျ့ အကွောငျး ပွောခဲ့ပါသေးတယျ။ ညီမလေးနောကျထပျ တဈယောကျ ထပျရတော့မှာမို့ ဂင်ျဂါလေးလညျး အရမျးကိုပြျောနခေဲ့ပါတယျ။ မမေရေဲ့ဗိုကျလေးကို တကိုငျကိုငျနဲ့ပြျောမဆုံးဖွဈနတေဲ့ သမီးကွီးလေးရဲ့ ပုံရိပျဟာ မမေေ့ အတှကျတော့ ကနြေပျစရာပါ။
အီတလီကိုလိုကျသှားတော့မယျ့အကွောငျးကို ” Heading to Italy!!! I miss all my fans and my friends!!! Mom and dad take care. Miss u ginngar and my hubby. God bless the trip!! I m alone for the long journey but I m strong enough to do this..god bless my trip to Italy. ” ဆိုပွီး ခမျြးခမျြးကပွောပွလာ ခဲ့ပါတယျ။ လမျးခရီးအန်တာရယျကငျးပွီး ရငျသှေးလေးကို ခြောခြောမှမှေ့ေ့ မှေးဖှားနိုငျပါစေ။
ဆိုင်ကယ်အလန်းစားကြီးစီးပြီး အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ မြန်မာပြည် အနှံ့ကို ခရီးတွေ ထွက်ချင်တယ် ဆိုတဲ့ နိုင်းနိုင်း